I-Shenzhen Fangcheng Teaching Equipment Co., Ltd. yasungulwa ngo-2009, ikomkhulu layo elise-Shenzhen iyibhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu eligxile kwi-R & D, ukukhiqiza nokudayiswa kwemishini yemfundo ye-multimedia.
Ngophawu lwe-EIBOARD ne-FCJYBOARD, imikhiqizo eyinhloko i-LED Recordable Smart Blackboard, i-LED Interactive Touch Screen.
I-Multimedia All-in-one Whiteboard, I-Interactive Whiteboard,I-Multimedia All-in-one PC, Itheminali ye-Interactive,I-Ultra short throw projektha kanye nezinye izixazululo ezihlakaniphile ezenziwe ngokwezifiso zezidingo ezahlukene zamakhasimende ayo, ezisetshenziswa kakhulu ezikoleni, amanyuvesi, izinkulisa, izikhungo zokuqeqesha, izinhlangano kanye nezikhungo zikahulumeni.
Kusukela yasungulwa, i-FangCheng iwine umklomelo wemboni yezemfundo othi "Brand Chinese", "i-China's top 10 Influential Teaching Industry brand", ithole izitifiketi ze-CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001.
Ngeqembu eliqinile le-R&D nemigqa eminingi yokukhiqiza, i-FangCheng inamalungelo ayo obunikazi bezingxenyekazi zekhompuyutha namalungelo okukopisha isofthiwe. Imikhiqizo ithunyelwe emazweni angaphezu kwe-100 nezindawo ngabasabalalisi bayo, ama-ejenti kanye nozakwethu be-OEM&ODM emhlabeni wonke, futhi iye yaqashelwa ngazwi linye abasebenzisi.
I-FangCheng ithobela izinga elithi "Educational Informatization 2.0", futhi isungula imfundo yesevisi.
Ngombono "Wokuba Umkhiqizo Ohamba Phambili Wokwaziswa Kwezemfundo" kanye Nomgomo "Wokusiza Ukufundisa Okuhlakaniphile"
asisoze sayeka ukuthuthukisa imikhiqizo emisha kanye nezixazululo ezididiyelwe zokufeza izidingo ezisafufusa zamakhasimende ethu.